zehlile izibalo zobugebengu kuleli - Ilanga News
Home Izindaba zehlile izibalo zobugebengu kuleli
zehlile izibalo zobugebengu kuleli
UNGQOGQOSHE wezamaPhoyisa kuzwelonke, uMnu Bheki Cele, umemezele ukwehla kobugebengu kulesi sikhathi sokugonqa kwezwe izinsuku eziwu-21, ukugwema ukubhebhetheka ngamawala kweCovid-19.
Uthi ukholwa wukuthi ukwehla kobugebengu kudalwe wukuvalwa kokudayiswa kotshwala. Lesi simemezelo senziwe ngokhulumela lo mnyango wamaphoyisa, uBrigadier Mathapelo Peters, othe ngokujwayelekile ungqongqoshe uCele (osesithombeni) izimemezelo zalolu hlobo uzenza uma sekudedelwa izibalo zobugebengu zika-2019/2020 okufanele azethulele iphalamende ngasekupheleni konyaka.
Uthi lezi azethulayo kakukabi yilezo ezizokwethulelwa iphalamende ngoba lezo ziqale zihlolisi-swe ngaphambi kokukhishwa. Izigameko zokubulawa kwabantu zehle zisuka ku-326 zaya ku-94 uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka owedlule. Amacala okudlwengula ehla esuka ku-699 aya ku-101. Izigameko zokushaya ngenhloso yokulimaza zehle zisuka ku-2673 zaba ku-456.
“Izigameko zokudunwa kwezimoto, amaloli, ukugqekezwa kwemizi, amabhizinisi zithathwa njengezigameko ezinodlame kakhulu lapho izigebengu zisuke zihlome ngezibhamu. Lolu hlobo lobugebengu luhlukumeza kakhulu izisulu nabantu nje jikelele.
“Lezi zigameko zehle zisuka ku-8853 zaba wu-2098,” kusho uBrigadier Peters. Uthi izigameko zokuhlukumeza ngokobulili zilokhu ziqhubekile nokwenyuka, okuyinto ebakhathazayo.
“Sesithole izingcingo eziwu-2 300 zokuhlukunyezwa kwabantu ngokobulili selokhu kuqale lezi zinsuku eziwu-21 ezimenyezelwe ngumengameli wezwe zokuthi abantu mabahlale emakhaya ukuvimbela ukubhebhetheka kwegciwane le-corona.
“Ungqongqoshe wamaphoyisa uyawacela ukuba aqinise umthe-tho ophikweni lodlame lwasemakhaya, ukuvikela izingane nezigameko zokuhlukumeza ngokocansi.
“Siyakujabulela ukukhuliswa kwesigwebo kulaba abathweswe la macala. Sizoqhubeka sisebenze ubusuku nemini ukuqinisekisa ukuthi izigebengu ezibhekene nala macala okuhlukumeza abesifazane nezingane, zithola izigwebo ezizifanele.
“Lokhu sizokwenza kube wumkhuba wethu kuze kuba ziyancipha izigameko zokuhlukumeza ngokobulili kuleli,” kusho uMnu Cele kulesi sitatimende.
Previous articleEzimnandi kubalandeli beChiefs ngoManyama
Next articleKushaqwe utshwala obebudayiswa isinyenyela eDundee